Ihoseyile enkulu-Caliber Flat Hose yePetroleum Manufacturer kunye noMboneleli |JL
TPU umbhobhoiphakathi kwerabha kunye neplastiki, eneempawu ezininzi ezibalaseleyo, masilandele iJiangsu Jinluo New Material Technology Co., Ltd. ukufunda ngayo!
1. Ukumelana nokugqwesa okugqwesileyo: ixabiso layo lokugqoka i-Taber yi-0.35-0.5mg, encinci kunye nobukhulu obuphakathi kwiiplastiki.Ukongezwa kwe-lubricant kunokunciphisa ukungqubuzana kunye nokuphucula ngakumbi ukuxhatshazwa kokugqoka.
2. Amandla okuqina kunye nobude: amandla okuqina e-TPU ngama-2-3 amaxesha erabha yendalo kunye nerabha yokwenziwa.Amandla okuqina e-polyester TPU yi＞I-60MPa kwaye ulwandiso luyi-410%.Amandla okuqina e-polyurethane TPU yi-50MPa kwaye ubude yi-550%.
3. Ukuchasana kwe-oyile: ukuxhathisa i-oyile ye-TPU kungcono kune-NBR, kunye nobomi obugqwesileyo bokumelana neoli.
4. I-TPU iphezulu kunerubha yendalo kunye nezinye iirubha zokwenziwa kwiqondo lokushisa eliphantsi, ukumelana nemozulu kunye nokumelana ne-ozone.Ukuxhathisa kwayo i-ozone kunye nokumelana nemitha kunezicelo ezikhethekileyo kwishishini le-aerospace.
5. Ucoceko lonyango lokutya: I-TPU ine-biocompatibility kunye ne-anticoagulation, i-TPU yonyango isetyenziswa kakhulu kwaye isetyenziswa ngokubanzi.Njengemithambo yegazi, i-ureters, i-infusion tubes.I-TPU isetyenziswa kakhulu kwishishini lokutya kuba ayinayo ityhefu kwaye ayinancasa.
6. Uluhlu lobunzima: ubunzima be-TPU yi-10a-80d, kwaye ineempawu ezifanayo ze-deformation deformation phantsi kwe-15A.I-TPU i-elastic xa ubulukhuni bungaphezu kwe-85A, oluphawu lokuba ezinye i-elastomers azinayo.Ke ngoko, i-TPU inomthamo omkhulu wenkxaso yomthwalo kunye nokufunxa okulungileyo kunye nesiphumo sokukhupha.
7.TPU umbhobho ihlulwe ngokubanzi ibe yi-polyester yohlobo lwe-TPU, uhlobo lwe-polyether ye-TPU kunye ne-poly (styrene) kunye ne-poly (caprolactone) uhlobo lwe-TPU hose.
Qaphela: Iiparamitha ezinje ngobubanzi bangaphakathi, ubukhulu bodonga, ubunzima, uxinzelelo, umbala, njl njl.
Inkcazo yenkqubo yokuvelisa kunye nomjikelo wokuhanjiswa
Ukukhethwa kwemathiriyeli ekrwada→→→Ithumbu elilukiweyo lwamathambo amathambo
Inkcazo yenkqubo yokuvelisa kunye nexesha lokuhanjiswa kwe-polyurethane hose
1. Ukukhetha imathiriyeli ekrwada
Thenga i-polyester filament ehambelanayo kunye ne-TPU yemathiriyeli ekrwada (izixhobo ezikumgangatho ophezulu ekrwada)
2. I-polyester filament ifakwe kwi-loom ukwenzela ukuveliswa kwe-hose framework layer kunye nokuhlolwa komgangatho we-polyester industrial yarn.
Ngaphambili: Umbhobho waManzi wokunkcenkceshela Ngobunzima obuKhanyayo, indawo yokuPhumela yoMoya oKhawuleza kunye nokuPhila ngokuLula
Okulandelayo: Umbhobho waManzi we-TPU onokuSetyenziswa Ububanzi obungaPhakathi, ukutyeba kodonga, ubunzima, uxinzelelo, umbala, njl.